हाम्रोबारे - IGT
बुद्धि सुरु परीक्षण
देश द्वारा औसत IQ
English Русский 日本語 Español Deutsch langue française Українська čeština język polski Português Afrikaans العربية azərbaycan dili беларуская мова български език বাংলা bosanski jezik dansk ελληνικά eesti keel فارسی suomen kieli עברית हिन्दी magyar Հայերեն Bahasa Indonesia Íslenska Italiano Basa Jawa ქართული қазақ тілі 한국어 Кыргызча latviešu valoda македонски јазик Bahasa Melayu Nederlands Norsk پنجابی hrvatski jezik Română सिन्धी සිංහල Slovenský Jazyk Slovenski Jezik Shqip српски језик Svenska тоҷикӣ ไทย Türkmen Türkçe татар теле اردو Ўзбек Tiếng Việt Tiếng Việt 汉语 isiZulu lietuvių kalba
कुल परीक्षण गरिएको:4928 064
IGT (IQ ग्लोबल टेस्ट) मानवीय बुद्धिमता मूल्यांकन गर्न सब भन्दा सही अनलाइन प्लेटफर्म हो। हामी परिणामहरू गणना गर्न हाम्रो स्वामित्व एल्गोरिथ्म संग एक अद्वितीय परीक्षा प्रयोग गर्दछौं, र यसले हामीलाई सबैभन्दा अमूल्य मूल्यांकन प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। हामी 1 15 भन्दा बढी बिभिन्न प्यारामिटरहरू बढी छलफल गर्दछौं, परीक्षणहरू पूर्णता पूरा हुने समयबाट सुरू गरेर र तपाईंको प्रत्येक उत्तरलाई लाखौंको तुलना गर्न।
हाम्रो उपलब्धिहरु को बारे मा केहि जानकारी:
परीक्षण गरियो> 1,50000,000
प्रयोगकर्ताहरू> 1 1400 देशहरूमा परीक्षण गरियो।
> संसारभरका 50 hr एजेन्सीहरू आफ्नो प्लेटफर्मको प्रयोगले उनीहरूको भर्ती प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न प्रयोग गर्छन्।
सेवा को लागि सिर्जना गरिएको हो?
हाम्रो सेवा ती व्यक्तिहरूको लागि राम्रो छ जो आत्म-विश्लेषण गर्न उत्सुक छन्, कम्पनीका लागि धेरै कर्मचारीहरू, र एचआर एजेन्सीहरू।
के यो भुक्तानी परीक्षण सेवा हो? किन?
हामी हाम्रो परीक्षण सेवाहरूको लागि चार्ज गर्नेछौं। अन्तिम लागत तपाईंको क्षेत्रमा निर्भर गर्दछ, तर यो नतिजाको2$ 20 भन्दा बढी हुनेछ, सबै शुल्कहरू समावेश छन्।
हामीले पत्ता लगायौं कि यो रमाईलोको लागि परीक्षणलाई समावेश गर्ने उत्तम तरिका हो। परीक्षणका लागि भुक्तानकर्ताहरू गवाही दिने प्रक्रियालाई गम्भीरताका प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्। यो दृष्टिकोणले हामीलाई संसारमा सब भन्दा सही अनलाइन टेस्ट सेवाको लागि अनुमति दिन्छ!
टेस्टिंग प्रक्रियाको क्रममा ध्यान केन्द्रित गर्दै विज्ञापन ब्लकहरू विच्छेद गर्दै, हाम्रो उत्पादनलाई नियमित रूपमा सुधार गर्न, र आईजीएचटी टीमका लागि उत्तम विशेषज्ञहरूलाई भाडामा लिन सकिन्छ।
मेरो परिणाम पुनर्स्थापना